Sawirro: Taliyaha cusub ee ilaalada Madaxtooyada oo xilka la wareegay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Sawirro: Taliyaha cusub ee ilaalada Madaxtooyada oo xilka la wareegay
Sawirro: Taliyaha cusub ee ilaalada Madaxtooyada oo xilka la wareegay
April 8, 2018 admin492
Taliyaha cusub ee ururka 60aad Ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya Gashaanle Odowaa Yuusuf Raage iyo Abaadulaha ururka 60aad Ilaalada Madaxtooyada Laba xidigle Dayax Abdi cabdulle ayaa Maanta la wareegay Xilka ka dib markii dhawaan xilka laga qaaday Taliyihii ciidamada Madaxtooyadda Afcaddeeye.
Hoggaanka cusub ee Ciidamada Madaxtooyadda ayaa ah dhalinyaro , waxaana uu taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Madaxweyne Farmaajo ay isla garteen in dhalinyaro loo dhiibo Hoggaanka ciidamada xoogga.
Taliyeyaasha cusub ee dhalinyaradda ah ayaa dad badan waxa ay Aaminsan yihiin ay waxbadan kusoo kordhin doonaan Shaqadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. inkastoo Warar kale sheegayaan in Taliyihii hore xilka looga qaaday sababo la xariira khilaafka Madaxda Sare Dowladda.
Wararkii ugu dambeeyey Magaalada Muqdisho.
20 Qodob oo Cadeynaya inuu Fashilmay Xasan Cali Kheyre
Guddiga Difaaca ee Barlamaanka oo sheegay in Maxkamad la soo taagayo saraakiil ciidan
Xukuumadda Soomaaliya oo Gurmad Dhaqaale ka dalbatay Qadar
Hal qof oo ku dhintay qarax ka dhacay agagaarka isgoyska Jubba
Xaaf oo dib ugu laabtay Gaalkacyo
Dhakhtar Caan ah oo lagu dilay Muqdisho